မင်းသား Chris Pratt
Warner Bros. အနေနဲ့ DCEU ရုပ်ရှင်တွေကို ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားထက်မှာ အခမ်းနားဆုံးဖော်ပြနိုင်ဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရင်းနှီးတည်ဆောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“Arrowverse” တီဗီစီးရီးကို ဖန်တီးခဲ့သူ ဒါရိုက်တာ Greg Berlanti ဟာ သူ့အနေနဲ့ DCEU အတွက် ရုပ်ရှင်ကားတကား ဖန်တီးဖို့ရှိနေပြီး အဓိကဇာတ်ကောင်ဟာ အချိန်ခရီးသွား စူပါဟီးရိုး တယောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်း တစွန်းတစ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
ဇာတ်ညွှန်းရေးသားမှု အပိုင်းလည်း အရင်နှစ်တွေကတည်းက ပြင်ဆင်လာခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့် WB. အနေနဲ့ ပါဝင်မယ့် သရုပ်ဆောင်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရွေးချယ်ခွင့်ပြုထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Booster Gold ဇာတ်ကောင်ဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေ အမြင့်မားဆုံး ဖြစ်နေပြီး အဆိုပါဇာတ်ကောင်နေရာအတွက် နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင် တဦးကို အရေးတကြီး ရှာဖွေဖို့ လိုအပ်နေခဲ့တာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တုန်းကလည်း WB. အနေနဲ့ Deadpool သရုပ်ဆောင် Ryan Reynolds ကို မျက်စိကျနေကြောင်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့အပြီးမှာ အခုအချိန်မှာလည်း “Star Lord” သရုပ်ဆောင် Chris Pratt ကို ဇာတ်ကောင်တနေရာအတွက် ကမ်းလှမ်းဖို့ ရှိနေကြောင်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဟာသဉာဏ်ရှိတဲ့ ဇာတ်ကောင်နေရာတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးသူတွေကို အဓိကထား ရှာဖွေနေခဲ့တဲ့ WB. အနေနဲ့ Chris Pratt အတွက် ကမ်းလှမ်းခြင်း ရှိ ၊ မရှိတော့ အခုထိ မသိရသေးပါဘူး။
Marvel Studio ရဲ့ “Guardians of The Galaxy” ရုပ်ရှင်မှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ Chris Pratt ဟာ အခုအချိန်မှာတော့ DCEU အတွက် ဦးစားပေးစာရင်းမှာ နေရာယူထားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Ryan Reynolds, Chris Pratt တို့အပြင် တခြားနာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်တွေကိုလည်း ရွေးချယ် စိစစ်နေတာကြောင့် သိပ်မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ DCEU နဲ့ လက်တွဲမယ့် သရုပ်ဆောင်တယောက်ယောက်ကို ပရိသတ်တွေ သိရှိကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Jurassic World ကို အသစ်ပြန်လည် ဖန်တီးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်မှာလည်း Chris Pratt ရဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ဟာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်တွေကို သဘောကျစေခဲ့တာကြောင့် WB. အနေနဲ့ ဘယ်လိုကမ်းလှမ်းလာမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
Topics: Chris Pratt, Warner Bros